Ra’isalwasaaraha cusub ee Itoobiya oo qorsheynaya Waddahadalo uu la galo Eritrea – Radio Daljir
Ra’isalwasaaraha cusub ee Itoobiya oo qorsheynaya Waddahadalo uu la galo Eritrea
Abriil 2, 2018 1:13 g 0
Rai’salwasaaraaha cusub ee Dalka Itoobiya Abiy Ahmed,ayaa maanta loo dhaariyay xilka Ra’isalwasaraaha Dalkaasi,waxaana munaasibadda dhaarta kaddib uu khudbad uu jeediyay ka sheegay in uu raadinayo wadahadal uu la galo dalka Eritrea.
Waxaa uu Abiy sheegay in Eritrea looga baahanyahay sida Itoobiya oo kale in ay meel iska dhigto khilaafka iyo coalaadda islamarkaana u diyaar garowdo waxaa uu ku sheegay isfaham dhameystiran oo dhexmara labada dowladood.
Xiriirka Itoobiya iyo Eritrea ma fiicneyn tan iyo madaxbanaanidii Eritrea ee ay ku heshay dagaalka,dagaalka socday labada Sano ee dhexmaray labada dal ayaa galaaftay nolosha 70,000 oo labada dhinaca ah.
Khudbad uu ka jeediyay TV-ga dowladda ayuu ka sheegay in Itoobiya iyo Eritrea aysan ahayn kaliya labo dal oo dano kala leh ee ay yihiin dad uu dhiigga mideeyo,sidaas darteedna xukuumadda Asmara looga baahanyahay in ay u diyaar garowdo dhameynta isfaham darrida labada dal.
Mr Axmed ayaa yiri “ waan garab istaageynaa walaalaheenna Afrikaanka ah,gaar ahaanna deriskeenna ah,waqtiga wanaagsan iyo midka xumba“.
Eritrea ilaa hadda kama hadlin magacaabista iyo dhaarinta Ra’isalwasaaraha cusub ee Itoobiya,waxaana Ninka hadda qabtay talada Itoobiya uu muujiyay sida uu diyaar ugu yahay in ay wadahadlaan labada dal.
Taliyaha Ciidanka Asluubta oo Booqday Xarunta Caruurta celinta Caruurta Darbi jiifka
Ciidanka Dowladda Somaaliya oo kaashanaya AMISOM oo howlgalo kawadda Shabeelaha Hoose